Mabhuku eChristian Gálvez, kufamba kuburikidza nehupenyu hwaLeonardo da Vinci | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku naChristian Gálvez.
"Mabhuku eChristian Gálvez" kutsvaga kwakanyanya pawebhu. Inowanzoitwa nevanoda hupenyu hweLeonardo da Vinci, vachiziva kuda kwemunyori wechiSpanish weFlorentine polymath. Gálvez munyori akasarudzika mumufananidzo waLeonardo Da Vinci uye akazivisa nerudo neRenaissance. Anenge zvese zvinyorwa zvake zvinotenderera pane chimiro cheiyo Florentine muimbi uye muvambi. Uku ndiko kuda kwake nhoroondo uye Da Vinci zvekuti vamwe vatsoropodzi nevateveri vakamuratidzira saiye Dan Brown ChiSpanish.
Munyori, semunyori akanaka, haana kugara asina gakava. Zvakaitika kuti muna Zvita 2018, nekuda kwekuvapo kwaGálvez semukurumbira mukuratidzira kwechiratidziro Leonardo Da Vinci: zviso zvehunyanzvi, Dare reSpanish reArt Nhoroondo (CEHA) rakamupomera mhosva yekupinda zvinehunyanzvi. Sekureva kweECHA, Gálvez haasi iye munyori wenhoroondo, pamberi pazvo, akazvidzivirira achiti nhaurirano yebasa rake yagara iine ruzivo kupfuura sainzi.
1 Basa rake rinomudzivirira
2 Hupenyu hwega, kudzidziswa uye basa rehunyanzvi
2.1 Kuberekwa uye kudzidza
2.2 Chikamu chake semuratidziri uye mamwe mabasa
2.3 Kudzokera mukuita
2.4 Kupokana nezvipfuyo
2.5 Razvino basa raitwa
2.6 Kutenda kubva kuna Christian Gálvez
3 Christian Gálvez - Mabhuku
3.1 Kutanga kuburitsa uye vekutanga vanotengesa zvakanyanya
3.2 Yakagadziriswa Gioconda, Mufananidzo weRenaissance Mukadzi
3.3 Mudiki Leo da Vinci
3.4 Uraya Leonardo Da Vinci
3.5 Namatira Michelangelo
3.6 Leonardo da Vinci: vakatarisana
Basa rake rinomudzivirira
Chero zvazvingava, Christian Gálvez akawana budiriro inoshamisa semunyori webhuku kubvira paakatanga kuburitsa mu2010.. Munyori awana zvinyorwa zvinovaraidza (zvimwe zvakare zvakaitwa) pamwe nekubudirira kwebasa rake mune zvimwe zvinhu zvehunyanzvi senge firimu neterevhizheni.
Hupenyu hwega, kudzidziswa uye basa rehunyanzvi
Kuberekwa uye kudzidza
Christian Gálvez akaberekerwa muMóstoles, Spain, musi waMay 19, 1980. Pakutanga akadzidza Chirungu Teaching uye Philosophy, kunyangwe asina kuzvipedza. Kutanga kwake mukuita kwakatangira muna 1995 munhepfenyuro yeterevhizheni Chiremba wemhuri. Mushure meizvozvo akawana mamwe mabasa ekutsigira Imba yenyonganiso (1996) uye Afterclass (1997), pakati pevamwe.
Chikamu chake semuratidziri uye mamwe mabasa
Sezvo zva1998 aiita nzvimbo semuterevhizheni muzvirongwa zvakaita se Manheru ezhizha, Kuseka mukunyanyisa y Kupererwa nekirabhu yemagariro, vekupedzisira vakaita semwana. Gare gare akashanda semutori wenhau pachiratidziro chinosetsa Chero ani anokundikana (2005-2007) weiyo Telecinco network. Ichi chirongwa chakazove chekutanga chebasa rake semutungamiriri wemakwikwi Pasiwedhi (Telecinco), kwaakasarudzika semuvaraidzi kubva muna Chikunguru 16, 2007 uye aive nevateereri vane mukurumbira muSpain kusvika Gumiguru 2019.
En Pasiwedhi akasangana nemukadzi wake, Almudena Cid, waakaroora mu2010. Christian Gálvez akabatanidza basa rake mumakwikwi Pasiwedhi pamwe nekumwe kuoneka pazviratidziro senge chaicho chiratidzo Kushanda Tony Manero (2008), iyo tarenda yekuongorora mukwikwidzi Iwe unokosha (2008-2013) uye Vakapona (2009-2001), kutumidza mashoma.
Muna 2011 akatangazve basa rake rekuita mufirimu Hapana tsoka kana musoro, inotungamirwa naAntonio del Real uye kugovana vatambi naJaydy Michel naBlanca Jara. Kubva 2013 akashanda sehunyanzvi mune fungidziro uye magamba emagazini ZVIITIKO Cinema-Vhidhiyo-Tele.
Muna Chikunguru 2015 akaendesa kune Telecinco network Imhuka yakadii! makwikwi ane varidzi vezvipfuyo uye varidzi. Mushure meichi chirongwa Gálvez akagamuchira kumwe kushoropodzwa kubva kumasangano ekodzero dzemhuka. Izvi zvaikonzerwa nekuti nyanzvi dzakatarisa chimiro fomati chisina kunaka uye nekuda kwekuvapo kwemamwe marudzi ekunze.
Razvino basa raitwa
Basa rako razvino (kunze kwe Pasiwedhi) yanga iri kuratidzwa kweiyo Euskalgym International Rhythmic Gymnastics Gala muVitoria. Izvi zvakazviita mune ayo edhisheni yemakore 2016 na2017 Mukuwedzera, yaive nechitarisiko mu Dhonza (chikamu che Ndibatsirewo) muna 2019.
Kutenda kubva kuna Christian Gálvez
Pakati pekusiyana kwakatanhamara kwakatambirwa naChristian Gálvez maProtagonistas de Televisión Award (2010), iyo Antena de Oro Mubairo (2011) uye iyo Iris Mubairo semuridzi wepamoyo wezvirongwa zve2017.
Christian Gálvez - Mabhuku
Kutanga kuburitsa uye vekutanga vanotengesa zvakanyanya
Chinyorwa chake chekutanga semunyori chakatangira kubva ku2010, pasi peiyo Espasa imba yekutsikisa, Kwete-kunyadziswa kwenyika. Uku ndiko kuunganidzwa kwezviitiko zvako semutori wenhau. Kwapera gore, pasi pechinyorwa chimwe chete, akaburitsa Nhoroondo ngaive newe. Muna Kubvumbi 2013 yake yekutanga bestseller akaonekwa: Iwe une tarenda: maitiro ekuwana zvakanakisa kubva paruoko rwaLeonardo Da Vinci, pamwe nemuparidzi Alienta. Ichi chinyorwa chinobatanidza hupenyu nebasa raLeonardo nepfungwa yemurairidzi.
Yakagadziriswa Gioconda, Mufananidzo weRenaissance Mukadzi
Con Yakagadziriswa Gioconda, Mufananidzo weRenaissance Mukadzi, Christian Gálvez anopindira mune zviripo nhoroondo mareferenzi ekuzivikanwa kweiyo yemumwe wemifananidzo yakakurumbira yaLeonardo Da Vinci. Saizvozvowo, mubhuku rino munyori anoongorora mamiriro epasirese ebasa remunhukadzi panguva yeRenaissance uye vanogovana dzidziso pamusoro penyaya yenyanzvi dzakasiyana mumunda. Ichi ndicho chimwe chinonakidza mabhuku akafuridzirwa nemifananidzo yakakurumbira.
Mudiki Leo da Vinci
Muna Chivabvu 2014, Gálvez akapinda muSpanish Academy yeTerevhizheni Arts neSainzi. Kubva gore rimwe chetero akatanga chirongwa chevana Mudiki Leo da Vinci (Alfaguara imba yekutsikisa). Iri basa rine mavhoriyamu gumi nerimwe akaburitswa kusvika pari zvino.
Iri bhuku rakakwanisa kupinda muvateereri vevana, richisvika pakutengesa kukuru. Zvichida chikamu chakakosha kwazvo chemupiro uyu naGálvez chiri kutaurirana kune vadiki nezve hupenyu nebasa rehunyanzvi hwaive Da Vinci.
Uraya Leonardo Da Vinci
Gore ra2014 rakaona zvakare kuvhurwa kwe Uraya Leonardo Da Vinci, bhuku rinotsanangura mamwe emakakatanwa akakosha muEurope panguva yeRenaissance uye kuti izvi zvakakanganisa sei nyika dzeItari kubva mune zvechitendero netsika nemaonero. Muchirevo ichi, wechidiki Leonardo Da Vinci akapomerwa sodomy. Nechikonzero ichi, akavharirwa kwemwedzi miviri panguva yaakabvunzurudzwa nekutambudzwa kunyangwe pakashaikwa humbowo hwakasimba pamusoro pake.
Quote naChristian Gálvez.
Muna Kurume 2016 akaburitsa Namatira Michelangelo. Iyi ndiyo vhoriyamu yechipiri yeMakoronike eRenaissance. Iri ibhuku rinozvinyudza mune hunyanzvi, chakavanzika uye chitendero cheRenaissance. Iyo zvakare iri nyaya yehupenyu pakati paFlorence neRome uyo akazove mumwe wevanodisisa veVictoria uye nyanzvi yekugadzirisa iyo yakaita kuti Sistine Chapel ibvire.
Leonardo da Vinci: vakatarisana
Muna 2017, akaburitsa Leonardo da Vinci: vakatarisana. Iri zita rakagashira Christian Gálvez kugadzwa senhengo inotora chikamu cheLeonardo DNA Project. Nekuda kweizvi, munyori achange ari chikamu chekufukunura, kupora kwemagene ake uye kumisikidza kumeso kwemuartist.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Mabhuku naChristian Gálvez